Global Voices teny Malagasy » Ao Kiobà, Tanàna Haolo Noho ny Fanesorana Indostiria · Global Voices teny Malagasy » Print
Ao Kiobà, Tanàna Haolo Noho ny Fanesorana Indostiria
Voadika ny 04 Mey 2017 15:50 GMT 1	 · Mpanoratra Periodismo de Barrio Nandika (fr) i Christel Pistre, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Mety hanakatona ozinina famiazana fary manerana an'i Kiobà ny fizotra Tarea Álvaro Reynoso (Saripika: Julio Batista)
Antsoin'ny vaomieram-pokonolona Gregorio Arleé Mañalich, any amin'ny faritany andrefana, Mayabeque ao Kiobà hoe ozinina fanaovan-tsiramamy izy, fa tsy misy intsony ny milaza voka-pamokarana any. 12 taona lasa izay no nitsahatra tamin'ny asany ny ozinina fanaovan-tsiramamy. Taorian'ny fijanonan'ny asa, natao ny fandravana. Niendaka isam-piesy avy eo any ozinina mandra-pahatsy nisy niangana intsony afa-tsy ny fonony vita amin'ny vy-tsy.
Mpiasa 272 no tsy maintsy nikaro-bahaolana. Nisy ny niova asa, ny hafa nanaiky ny hifindra isan'andro hatrany amin'ireo fanadiovan-tsiramamy hafa izay mbola mamia fary.
Ho an'i Nene, zokiolona mpaningina mifoha vao maraina koa isan'andro, manakana azy tsy hatory ny zafra. Saingy nilazàna izy fa any Oriente, misy ny ozinina famiazana siramamy hiasa indray rehefa tsy nihetsika nandritra ny fotoana lava, satria voakijakojan-dry zareo ny toerana.
Tsy nampatory azy izany.
Tao Mañalich, tsaroan'i Nene tsara fa hotehirizina ny fanaovan-tsiramamy. Fa tsy nataony izany.
Namely ny indostirian'ny siramamy kiobàna ny valan'aretina, ny firodanan'ny vondrona sosialista, ny fidinan'ny vidin-javatra eny amin'ny tsena, ny tsy fahombiazana, ny fanapahan-kevitra ara-panjakana diso ary ny fikorontanan'ny toetrandro.
Tamin'ny taona 2016, 1,6 tapitrisa taonina ny vokatra siramamy, kely noho ny tamin'ny taona 1910 izany. Mety ho nampamoy fo ny mponina izany vaovao izany folo taona tany aloha. Saingy tsy mahaliana na iza na iza intsony ny faharatsian'ny vokatra amin'izao fotoana izao.
Naninona no noravana ny indostirian'ny siramamy kiobàna ?
Batey nanana ny fotoana namparesaka azy (Saripika: Julio Batista)
Tsy maintsy natao hanavotana ny toekarena ny fanarenana indray ny indositrian'ny siramamy : tsy zakan'ny firenena intsony ny ozinina fanaovana siramamy miisa 155, tratra aoriana ara-haitao sady tsy maharaka fifaninanana. Ny natao voalohany dia ny hamondrona ny vokatra any amin'ireo ahazoana tombombarotra indrindra, ary ny fetra dia 4 tapitrisa taonina isan-taona.
Ireo ozinina afaka namokatra siramamy amin'ny 4 centavos isaky ny livatra, na latsaka ihany no notazonina. Ny vahaolana amin'ny tsy fisian'asa : ny fianarana.
Ny anton'izany fepetra izany dia noho ny hakelin'ny vokatra fary sy ny krizy iraisampirenen'ny siramamy.
Nanomboka niakatra anefa ny vidin-tsiramamy nihoatra ny folo taona izao.
Nanomboka ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2025, tokony ho voatazona ho 15 na 16 centavos isaky ny livatra ny vidin'ny siramamy tsy voadio, araka ny tatitra “vinam-pambolena avy amin'ny OCDE-FAO” taona 2016.
Raha voatazona ny famokarana (3,6 tapitrisa taonina) tamin'ny taona 2001, dia ho nahazoana 815 tapitrisa dôlara ny fanondranana siramamy.
Tsy nandeha tsara ny zava-drehetra
“Ho andro manan-tantara tokoa ny andro androany”, izany no teny voalohany nataon'ny filoha kiobàna Fidel Castro nandritra ny kabariny tamin'ny 21 oktobra 2002 tao amin'ny ozinina fanaovana siramamy tao Lavandero. Toy izany no fomba nanombohan'ny fanarenana indray ny asa fanaovan-tsiramamy.
Taona maro manaraka izany, ozinina miisa 98 no najanona ary mihoatra ny 65 000 ny olona nandray ny karamany feno hianarana. Anjaran'ny fanaovana siramamin'i Gregorio Arleé Mañalich ny tamin'ny 14 mey 2004.
Niasa tao hatramin'ny taona 1967 i Luis Alberto Pérez. Raha milaza ny fanakatonana ny ozinina fanaovana siramamy i Nene – araka ny iantsoan'ny rehetra azy – ny teny averimberina matetika indrindra dia hoe “famitahana”.
Saika mitovy avokoa ny zavatra notenenin'izay olona nanontaniana : tsy nolazaina tamin-dry zareo mihitsy fa ho esorina ny ozinina fanaovana siramamy. Ho fitehirizana ny toerana dia nisy ny ekipa niasa feno tao.
Talohan'ny farany taona voalohany nikatonan'ny orinasa, nanomboka tonga amin'izay ny taratasy. Antonta-taratasy nosoratana tamin'ny fomba ofisialy ireo ka ny hany miova ao anatiny dia ny anaran'ny piesy halaina (esorina), ny nandefasana ny taratasy ary ny daty. Nosoniavin'i Ulises Rosales del Toro avokoa ireo taratasy rehetra ireo satria ny minisitra ihany ny manan-jò hanaisotra ny piesy. Taorian'izany dia nomena [ny olom-pehezina] ny andraikitra ary nihatonga matetika ny taratasy.
Roa taona no nitondran'i Juan Carlos Rivero ny orinasa efa tsy afa-mihodina intsony. Anisan'ireo nandefasana taratasy matetika izy. “Tsy nanambola ny firenena hividianana vokatra na piesy fanolo any amin'ny ozinina hafa mihodina”, hoy izy nanamafy.
Feno 64 taona i Eddy Reyes ary miandry ny taona hahazoana retirety any amin'ny toerana famiazana fary hafa izay antsoina hoe Boris Luis Santa Coloma. Esoriny tsy fidiny ireo fanorenana natsangany taloha. Isaky ny misy piesy iray esoriny dia manaitra ny 31 taona niainany izy.
Ny vokatra mivantana tamin'ny fanakatonana ireo toeram-pamiazana fary an-jatony ireny dia injeniera sy ny mekanisiana an-jatony ihany koa no tsy manana ozinina ampandehanina na karakaraina intsony.
Nofoanana ny tao-zava-baventy nieli-patrana indrindra tao Kiobà sady nanome asa betsaka indrindra tao amin'ny firenena. Maro ny tranga tany amin'ny vondrom-piarahamonina tany tsy nisy ny asa nasolo ny very toy izay nitranga tamin'ny fanorenana ireny toeram-pamiazana ireny.
Tsy ho fantatsika mandrakizay raha hitan'ny filoha kiobàna ny tarehin'ny mpihaino azy nandritra ny kabary lavabe tamin'ny 21 oktobra 2002 , raha nanome antoka izy fa mandeha tsara ny zava-drehetra any amin'ireo toerana famiazana fary efa nitsahatra asa dimy taona talohan'izany.
Ny vokatry ny fanakatonana ny ozinina fanaovana siramamy eo amin'ny olona
Taorian'ny taona 2004, tao Mañalich, tany amin'ny guarapera (kiôska fanaovana zava-pisotro) ihany no namiazana fary (Sary : Julio Batista)
Roa taona taoriana, ren'ny vaomieram-pokonolona ao Gregorio Arleé Mañalich fa rehefa misy ozinina mpanao siramamy iray mikatona, dia betsaka ny zavatra miova ary saika tsy ho amin'ny tsara kokoa mihitsy izany.
Rehefa nikatona ny toerana famiazana fary, na ny marina kokoa, rehefa natomboka ny fandravana, dia natsahatra ihany koa ny fanaovana tara ny lalana ary nitsontsorika ny asam-bahoaka (servisy).
Voatery nandeha tany amin'ny ozinina mpanao siramamy hafa i Nene sy i Eddy rehefa tsy nisy ny asa ary be loatra ny taona iverenana mianatra. Lasa mpisolo toerana ry zareo. Tsy manana hoavy ary mitoka-monina, betsaka koa ny tanora no nifindra monina tsy niverina intsony.
Tao amin'ny batey, toby niainan'ny mpiasan'ny fary tao Kiobà, nanangana ozinina mpanao paty fihinana izay tsy afa-mamelona akory ny tanànakely ry zareo. Mbola miteronterona hatrany ao ambadiky ny fanorenana vaovao ny sisan'ny ozinina famiazana fary.
Tamin'ny faran'ny taona 2016, niverina tao amin'ny milina famiazana Boris Luis Santa Coloma ao amin'ny toerana nanombohany niasa efa rava i Nene. Zafras miisa 49 no nahafahany milevina ao Mañalich amin'ny sheky mitentina 2 000 pesos.
Tsy mba olona be lolom-po i Nene – mainty hoditra, kely fa vitsy sisa ny nifiny ary mazava ny feony, saingy tsy ho avelany heloka mihitsy ny nandaingana azy. Efa folo taona izao no tsy mety ho azony ny ainy.
Nandray ny retiretiny tamin'ny faha-65 taonany i Nene, tsy noho ny tsy fananany hery fa noho ny fangidian'ny fanahiny.
*Ity lahatsoratra ity dia tsonga natokana ho an'ny Global Voices. Azonareo atao ny mijery ny endrika ôrizinaly, “Ozinina Mpanao Fanginana” ato amin'ity rohy ity  sy mamaky lahatsoratr'i Julio Batista hafa ato amin'ity rohy ity .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/04/99272/
 kabary lavabe tamin'ny 21 oktobra 2002: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2002/esp/f211002e.html
 ato amin'ity rohy ity: https://www.periodismodebarrio.org/2017/01/09/fabricas-de-silencio/
 ato amin'ity rohy ity: https://www.periodismodebarrio.org/author/juliobatista/